खानासँगै अचार खानुहुन्छ ? यी १० कुरा जान्नुहोस् | Ratopati
स्वाद बढाउनका लागि हामी धेरैजसो खानासँगै अचार खाने गर्दछौं । विभिन्न स्वादको बोतल वा प्लाष्टिकमा प्याक गरिएको अचार बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । तर यस्ता अचार खाने बानीका कारण उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, हृदयघातजस्ता थुप्रै रोगको खतरा बढ्ने गर्दछ । वास्तवमा अचारमा धेरै नुन हुन्छ । यस्ता अचार धेरै खाँदा शरिरमा सोडियमको स्तर बढ्ने गर्दछ जसले थुप्रै समस्या निम्त्याउने गर्दछ । नियमित यस्ता अचार खानुका बेफाइदा बारे हामी जानकारी दिँदैछौं ।
अचारमा सोडियमको मात्रा निकै धेरै हुन्छ जसले शरिरमा क्याल्सियमको मात्रालाई कम गरिदिन्छ । यसले हड्डी कमजोर बनाउँछ जसले अस्टियोपोरोसिसको खतरा बढ्ने गर्दछ ।
खानामा धेरै अचार समावेश गर्दा शरिरमा सोडियमको मात्रा बढ्ने गर्दछ । यसले उच्च रक्तचापको आशंका बढ््ने गर्दछ ।
अचारमा समावेश सोडियमले रक्त संचारलाई बिगार्छ । यसले मुटुको समस्याको आशंका बढ्ने गर्दछ ।
अचारमा हुने सोडियमले शरिरमा आइरनको मात्रालाई कम गरिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा शरिरमा बोसो बढ्ने गर्दछ ।
खाना खाँदा धेरै अचार खाँदा रक्त संचार बिग्रने भएकाले यसले दिमागमा नराम्रो असर पुर्याउँछ । यसो हुँदा स्ट्रोकको खतरा बढ्ने गर्दछ ।
धेरै अचार खाँदा शरिरमा सोडियमको मात्रा बढ्ने गर्दछ । यसले पेटको क्यान्सर हुने खतरा पनि बढ्ने गर्दछ ।
अचारमा पाइने सोडियमले क्याल्सियमलाई गलाएर मृगौलासम्म पुर्याउँछ । यसले पत्थरीको समस्या निम्त्याउँछ ।
अचारमा पाइने सोडियमले कपाल झर्ने समस्या निम्त्याउँछ ।
अचारमा रहेको सोडियमले शरिरमा पानीको कमी पैदा गरिदिन्छ ।
गुलियो अचारमा चिनीको मात्रा धेरै हुन्छ । खानामा यसलाई धेरै समावेश गर्दा मधुमेह रोगको प्रबल सम्भावना हुन्छ ।
के हो लामो जीवनको राज ? ६ कुरालाई ध्यान दिँदा बढ्न सक्छ आयू